Izaho sy ny kovetako fandroana dia manana fifandraisana manokana. Eo ho ahy izy rehefa misy sery mangatsiaka mahasosotra ahy ary tsy te-hanafana. Fandroana mangatsiaka avy eo ary fonosina matevina eo amin'ny sezalà, mahatsapa ho sitrana avy hatrany aho.
Bathtub - bebe kokoa noho ny fahadiovan'ny tena manokana
Fa na dia amin'ny fahavaratra aza dia malaza be ny kovetako fandroana. Rehefa miakatra hatrany ny mari-pana ary mitaraina ambanin'ny hafanana ny tsirairay, dia mandro mangatsiaka be aho ary manadino ny 40 degre tsapa tao anaty alokaloka. Aorian'ny andro iray mampihetsi-po dia saika tsy misy zavatra mampihetsi-po ahy maharitra toy ny fandroana feno tsara. Raha tsy kely dia kely ny kovetabe.
Izaho sy ny kovetako fandroana - © Elena / Adobe Stock
Misy zavatra vaovao ilaina
Amin'izao fotoana izao dia tena mieritreritra mafy ny hahazo kovetabe fandroana vaovao aho. Nandritra ny fikarohana nataoko dia nahita vahaolana isan-karazany aho. Izay rehetra mahita fa mitovy ny fandroana amin'ny fandroana dia diso tanteraka. Misy vahaolana mety ankehitriny amin'ny ankamaroan'ny olana. Manomboka amin'ny maodely lafo vidy ka hatrany amin'ny fahagagana mitahiry habakabaka dia voaroaka aho anio safidy. "Bathtub | Fiainana sy fahasalamana " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 16. Jona 2021 5. September 2021 Sokajy WellnessKeywords milomano, fandroana, Mitonia, fialam-boly, fandroana foam, WellnessLeave a Comment amin'ny fandroana | Fiainana sy fahasalamana
Ny fanorana dia zava-dehibe hatramin'ny taloha. Amin'izao fotoana izao dia tena zava-dehibe ny fanorana ka ny teknika fanorana maro karazana dia ampiasaina amin'ny kolontsaina maro samihafa. Eto amin'ity firenena ity, olona maro no mahatsapa fanamaivanana ny fanaovana otra amin'ny rindriny efatra rehefa avy niasa mafy ny andro tany am-piasana.
Fanorana: Torohevitra manampy amin'ny fanandramana mahatsapa fahatsapana ao an-trano
Avo lenta ny vokatry ny fahasalamana amin'ity karazana fanorana ity - na inona na inona fanorana miasa na ara-nofo na fanorana ho an'ny faritra misy vatana manokana na ny rafitra musculoskeletal iray manontolo.
Fanorana ao an-trano - © Cvilaclara / Adobe Stock
Raha tsy misy ny masseur azo anaovana otra dia azonao atao izany Massagers hahatratra ny vokany mahatsapa fahatsapana tsara. Noho ny fiakaran'ny mari-pana sy ny hetsiky ny fanorana tsy tapaka, ny fitaovana toy izany dia manampy amin'ny vokany miala sasatra ary manampy amin'ny famoahana ny fihenjanana mafy. "Manotra ao an-trano | Wellness " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 8. May 2021 5. September 2021 Sokajy WellnessKeywords Mitonia, fialam-boly, fanorana, Wellness, an-tranoLeave a Comment manotra ao an-trano | Wellness
Ny voankazo mavo kely dia tena manodidina azy rehetra. Ny ranony dia azo ampiasaina hanadiovana sakafo sy zava-pisotro na hanadiovana mora kokoa ny faritra sy ny zavatra. Ny ranom-boasarimakirana koa dia miasa zava-mahatalanjona kely amin'ny fikolokoloana tarehy, manome antoka ny endrika mena sy mena, afaka manamafy ny ketrona ary miady amin'ny teboka maivana.
Famokarana sy fampiharana ny voasarimakirana
Ny ranom-boasarimakirana apetaka amin'ny tarehy dia misy vokany mamelombelona sy mangatsiaka. Toy izany koa, ny sisa tavela amin'ny hoditra sy ny flakes dia esorina tsara, izay mitarika endrika tsara kokoa.
Voasarimakirana ho an'ny fikolokoloana tarehy - © Prostock-studio / Adobe Stock
Mba hamoronana ny fikolokoloana tarehy voajanahary dia takiana antsy, ranom-boankazo, landy vita amin'ny landihazo na volon'ondry ary voasarimakirana iray. Tapahina avy eo ny voasarimakirana ary voahidy. "Voasarimakirana toy ny fikolokoloana tarehy voajanahary - fahasalamana" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 10. Aprily 2021 5. September 2021 Sokajy WellnessKeywords peeling, voasarimakirana, Fanosorana voasarimakirana, Ranom-boasarimakiranaLeave a Comment ny voasarimakirana toy ny fikolokoloana tarehy voajanahary - fahasalamana
Ny fomba fahandro amin'ny fiainana: ampahany roa amin'ny fialam-boly ao amin'ny fianakaviana, ampahany iray amin'ny asa. Andro fiasana tsy misy adin-tsaina araka izay azo atao, mamorona vola be amin'ny fomba mahafinaritra, mandany fotoana amin'ny namana sy fianakaviana, manao fanatanjahan-tena ary mihinana salama - mety ho tsara tokoa.
Asa be loatra, fotoana kely sisa hiainana - ahoana no hahitanao fialan-tsasatra?
Iray amin'ireo olona manandrana mitondra izany rehetra izany ao ambanin'ny tafon-trano iray ve ianao? Avy eo fantatrao fa asa saika tsy azo atao izany.
Fahasalamana sy fialan-tsasatra - © Dan Race / Adobe Stock
Matetika dia misy ny resaka ilay antsoina hoe fifandanjana eo amin'ny asa, izay zava-dehibe ny fampihavanana ny fiainana matihanina, ny fialam-boly ary ny fianakaviana. Koa satria tombontsoa tena samy hafa be ireo, dia matetika no sarotra ny mamorona "fifandanjana".
Betsaka ny torohevitra ...
... Fa fanontaniana hafa ve raha tsara ireo. Voalaza fa raha miala sasatra kely ianao ankoatry ny fiatoana kasaina hatao dia tsy dia hiady saina ny asanao andavanandro.
Fa inona no tena fampiasan'ny mpiasa trotraka raha misotro ronono folo minitra izy, manana dite kaopy na mandeha an-dalambe? Fantany fa tsy maintsy hiatrika ny asany izy ao anatin'ny fanerena bebe kokoa aza. Amin'ny farany, ny singa mampiala sasatra dia mankany amin'ny zero.
Na dia eo amin'ny rindrinao efatra aza dia tsy azo atao ny mampiditra torohevitra toa tsotra ho an'ny fandanjana anaty sy fialan-tsasatra anaty. "Mitadiava fitsaharana - fahasalamana" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. March 2021 5. September 2021 Sokajy Lifestyle, WellnessKeywords Mila mahay mandanjalanja, fialam-boly, fomba fiaina, Asa-mandanjalanja ny fiainanaLeave a Comment hahita fitsaharana - fahasalamana